Brain: Ngwa Open-Platform nke mepere emepe maka nrụpụta ọrụ | Site na Linux
Brain: Ngwa Open-Platform nke mepere emepe maka imepụta ihe
Linux Post Wụnye | | Aplicaciones, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
N'oge ndị ọzọ anyị ekwuola maka ngwa maka melite arụpụta ọrụ n’elu tebụl nke kọmpụta ha. Maka edemede taa, anyị ga-ekwu okwu ọzọ Inbụrụ, nke na-adọrọ mmasị ma rụọ ọrụ emeghe iyi na cross ikpo okwu ngwa, bara ezigbo uru n'echiche ahụ.
N'ụzọ bụ isi, Inbụrụ bụ a Igba egbe, nke dị n'etiti ọtụtụ ọrụ na atụmatụ, na-enye anyị ohere ịkwalite ọrụ ọchụchọ anyị na kọmputa.
Oge ikpeazụ anyị kwuru banyere ya Inbụrụna Ndokwa, bụ 27 de enero de 2017, mgbe ọ na-agafe na nkwụsi ike mbipute, nọmba 0.2.3. Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwa a agbanweela mgbanwe na mmepe ya ruo mgbe December 5 nke 2017, mgbe e bipụtara, mbipụta nke ugbu a, nọmba 0.3.2.
Na ohere gara aga, anyị kọwara Inbụrụ dị ka:
"Ọ bụ a multiplatform, emeghe iyi ngwá ọrụ, mepụtara na electron kpuchie site Alexandr Subbotin, nke na-enye anyị ohere ịbawanye arụpụta anyị, ịnweta ọchụchọ, ozi, mgbako, ngwa, usoro mmechi, n'etiti ndị ọzọ, site na otu ngwa yana site na ụzọ mkpirisi keyboard".
Mụbaa arụpụtaghị ihe na Linux na Brain
Ma onye njirimara bụ isi gbakwasara njirimara onye ọrụ bụ:
Ndabere mwekota nke ọtụtụ arụmọrụ na otu ngwa.
Ike ịchọ ma ọ bụ nweta ọtụtụ ngwa na ole na ole clicks.
Ikike ịchọgharị na sistemụ faịlụ na nhụchalụ nke ọdịnaya (faịlụ / folda).
Akwado site na API dị ike nke na-enye gị ohere itolite ma wuo plugins nke gị.
Mfe nke ohere na ojiji, n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla, ekele maka oke ụzọ dị mkpirisi.
1 Cerebro: Mepee na obe-ikpo okwu ngwa maka arụpụtaghị ihe
1.1 Wụnye Cerebro na nkwụsi ike ya 0.3.2
1.1.1 Iji .Pimage faịlụ
1.1.2 Iji faịlụ .deb
1.1.3 Iji nchekwa ndị ọzọ
1.2 Ndozi ebe nrụnye
1.2.1 Correct Brain igbu
Cerebro: Mepee na obe-ikpo okwu ngwa maka arụpụtaghị ihe
Wụnye Cerebro na nkwụsi ike ya 0.3.2
Dị ka Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa Brain, ọ dị maka ndị ọrụ Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, dị ka GNU / Linux, faịlụ iyi nwere ike itinye na usoro .Ihe omume, na ya 0.3.1 mbipute. Mgbe ke Weebụsaịtị nke Electron Technology, na ngwa ngwa ya, enwere ngalaba maka Inbụrụ, na nnweta nke faịlụ a pụrụ ịdabere na ya na usoro .Ihe omume y .deb, ma na nke ya 0.3.2 mbipute. Ngwa a nwekwara saịtị na saịtị GitHub.
Iji .Pimage faịlụ
Ka ịwụnye Inbụrụ n'iji usoro nhazi a na mgbe ibudata faịlụ ahụ, naanị iwu iwu ndị a kwesịrị ime:
Iji faịlụ .deb
Iji nchekwa ndị ọzọ
Maka ndị na-amasị wụnye ngwa site na nchekwa, nwere ike iji ihe ọzọ, nke mejupụtara nbudata ihe ndị a .deb faịlụ nke ahụ ga-arụnye nchekwa dị nke kwuru na ebe nrụọrụ weebụ, akpọ Duck JAD - Ebe nchekwa. Mgbe nke ahụ gasị, anyị na-aga n'ihu ịwụnye ebudatara ngwugwu na ngwa ahụ Inbụrụ na-eme iwu ndị a:
Mgbe etinyere ngwa ahụ Inbụrụ, site n'ụzọ ọ bụla, naanị anyị ga-eme ya maka oge izizi site na Malite NchNhr / Ngwa mma, hazie ya ka ọ masịrị anyị, ma ọkacha mma ịmalitegharị kọmpụta ahụ kpamkpam, iji nyochaa ọrụ ya site na ncha.
Ndozi ebe nrụnye
Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịkọ mmebi ngwa, nke ahụ bụ, na-abụghị ogbugbu nke eserese eserese nke Inbụrụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a bụ ihe ngwọta kachasị dị:
Mepee mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ma mee iwu na mgbanwe ndị a:
Na ọdịnaya faịlụ ahụ gbanwere uru nke oke "trackingEnabled" de True site False. Chekwaa mgbanwe ndị ahụ ma na-agba mbọ ime ihe ziri ezi Inbụrụ.
Final faịlụ config.json
Hụ ihe ngwọta a na ndị na-esonụ njikọ.
Correct Brain igbu
Ọ bụrụ na nke a bụ azịza, nke m na-arụ ọrụ afọ ojuju na Ọrụ ebube 2.0, nke oke nhazi na njikarịcha nke MX Linux 19, nke na-adabere na ya DEBIAN-10, a ga-eji akara ngosi dị na taskbar rụọ ya arụ, wee gbue ya ewepụta ihe ndị a:
Site ugbu a gaa n'ihu, ọ ga-abụ naanị ịmụ otu esi eji ya Inbụrụ, ma wụnye ụfọdụ plugins dị ma ọ bụ ịmụta ike gị, ka jirichaa arụ ọrụ nke ngwa ọrụ a na GNU / Linux.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Cerebro», nke na-adọrọ mmasị ma rụọ ọrụ emeghe iyi na cross ikpo okwu ngwa, nnọọ uru iji melite arụpụtaghị anyị na tebụl kọmputa anyị; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Brain: Ngwa Open-Platform nke mepere emepe maka imepụta ihe
Enwerela ya ugbu a? Agbalịrị m ya n'oge ahụ na-achọ ihe ọzọ maka QuickSilver (QS) nke na-adịghị na GNU / Linux mana eziokwu bụ na echetaghị m ihe kpatara m ji tufuo eziokwu ahụ. Ugbu a m na-eji Kupfer, ọ bụghị zuru oke, mana ọ dị mma maka ojiji m na-eji ya emezu:
- Detuo faịlụ ndị ọzọ
- Kpọgharia aha faịlụ
- Mepụta na-agagharị dị iche iche nchekwa na ngwaọrụ
Ọ ga - enwerịrị ike (ọ nwere plugins) mana hey bụ nhọrọ ndị m na - ejikarị, yana ebe ọ nwere interface yiri nke QS ọ na - eme ka m mara.
Zaghachi ka arazal
Mmelite ikpeazụ ya, dị ka isiokwu ahụ na-ekwu, bụ "na Disemba 5, 2017, mgbe e bipụtara mbipụta nke nkwụsi ike ugbu a, nọmba 0.3.2." Agbanyeghị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ezigbo mgbakwunye (plugins) na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere ịbanye ntinye mgbakwunye ọhụrụ nke ndị nwere mmemme mmemme. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu ntakịrị banyere Cerebro, ana m akwado ntinye na-esonụ, nke abụọ nke 3, gbasara ya. Na nke mbụ m na-akọwa ụzọ dị iche iche echichi, na nke abụọ nhazi ya na ojiji ya, n'oge na-adịghịkwa anya na nke atọ na nke ikpeazụ, njikwa ụfọdụ ụfọdụ mgbakwunye bara ezigbo uru.
N'ezie, na ederede n'ọdịnihu m ga-ekwu maka ndị ọzọ na Cerebro dị ka Kupfer na Albert.
oru ngo-a anwụwo, ebe a bụ ihe ọzọ ọzọ.
Daalụ Walter! Na akwụkwọ ọhụrụ a ( https://blog.desdelinux.net/albert-kupfer-excelentes-aplicaciones-alternativas-cerebro-productividad/ ) Anyị atụnyela Ulauncher mana ọ bụghị dịka ngbanwe maka Brain kama dị ka onye mgbakwunye, ebe Ulauncher na-eri ọtụtụ ihe nchekwa RAM. Ekwadoro m ka ị jiri ya na-enweghị mgbakwunye na Cerebro.
Linux Mint ga-egbochi ntinye snapd zoro ezo
Emeelarịrị ụdị Git 2.27.0 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ mgbanwe ya